News - (Diiradda saar FOEN) Badbaadada albaabada iyo Windows-ka ee duufaanta '18 duufaanta' ka muuqatay amniga nidaamka amniga sare ee FOEN ee albaabada iyo daaqadaha
(Diiradda saar FOEN) Badbaadada albaabada iyo Windows-ka ee duufaanta 18 duufaantu ku dhacday ayaa muujisay amniga nidaamka amniga sare ee FOEN ee albaabada iyo daaqadaha
Yutu-duufaantii ugu xoogga badneyd, ayaa ku dhufatay jasiiradaha Mariana ee waqooyiga Mareykanka, kaasoo sababay qasaarooyin iyo waxyeelo guryo, dumay guryo, kor u qaadid tiirarka korantada iyo magaalooyinkii dumay.
Dhul cidlo ah oo ay ku dhufatay nooc 18 duufaan, wali waxaa ku yaal buuro dhaadheer oo sababay waxyeelo aan caadi aheyn xitaa dadkii ku sugnaa agagaaraha. duufaano. Albaabada iyo Windows-ka ayaa door muhiim ah ka ciyaara.
Inta badan albaabada iyo daaqadaha ma awoodi karaan duufaanka weyn. Sikastaba, albaabada amniga FOEN iyo daaqadaha amaanka wey ku taageeri karaan weerarka 18 duufaano. Khasaaro ma leh, dildilaacna ma jiro.
Guryaha oo dhan waxaa ku xeeran jawiga “ciriiriga hawada sare” iyo “adkeynta biyaha sare”. In kasta oo ay duufaantu ka baxsan tahay daaqadda, ma jiro farqiga u dhexeeya Windows iyo albaabada.
Tijaabaddii duufaanta darajada 18aad waxay aragtay tayada amniga FOEN ee badbaadada sare ee Windows iyo albaabada.
FOEN albaabo aluminium ah iyo nidaamka daaqadaha. Waxqabadka waa xogta qalbiga. Waxay leedahay adkeynta hawada sare, ciriiriga biyaha, adkeynta sare iyo kuleylka aadka u fiican, cadeynta xilliga qaboobaha iyo waxqabadka maqnaashaha. Heerka hawo la'aanta hawada ayaa gaarta 6 taas oo joojin karta daadinta hawada iyo soo gelitaanka boorka. Nadaafadda gudaha. Xaraashka kuleylka waa astaan ​​kale oo muhiim ah, qodobka K waa 0.8, isticmaalka tamarta yar, ka ilaali kuleylka gurigaaga mid aad u jilicsan xilliga qaboobaha iyo xagaaga qabow. Awoodda iska caabbinta cadaadiska dabaysha ayaa sidoo kale ah muujinta taas, badeecadu kama beddeli doonto ama ku dhici mayso dhererka 100meters. Biyo-yaraanta heerka sare ah, daadinta biyuhu kuma dhici doonin wax ka hooseeya fasalka 12 ee duufaan. Midda ugu dambeysa ee Xakameynta Codka, Yaree 35 db
Ilaa hadda waxaan horay u baarnay oo aan horumarinay 4 taxane oo waaweyn: Taxanaha Eiko ee Jarmalka, taxanaha guriga raaxada, taxanaha xagaa ka sarreeya iyo taxanaha Classic ee Shiinaha.
FOEN waxay ahayd Shirkaddii ugu Horaysay ee Furtay Machadka Aluminium Window & Door System Institute ee Shiinaha. Mararka qaarkood, macaamiisheena ayaa iska indhatiri doona qaybtaan. In kasta oo ay tani tahay qaybta ugu habboon ee lagu daryeeli karo dhammaan daaqadaha nidaamka iyo kooxda albaabbada. Marka hore micnaheedu waa waara-dheer waa khibrad. Taasi waa sababta aan ugu faanayno. Taasina waa sababta aan u leenahay Kooxda Weyn ee Alloominta Weyn ee Daawada & Albaabada Nidaamka Cilmi-baarista ee Shiinaha. Waqtiga duulista, sanadka 2017, saldhiga labaad ee soosaarka aluminium ee Henan FOEN Aluminium Warshadda ayaa xoog sheegatay, ku dhawaad ​​isla waqtigaas, Foen waxay horeyba ugu fiicneyd Shiinaha 5 shirkadood oo aluminium ah waxayna ku guuleysatay 500 Factorys Shiinaha ah. Illaa iyo hadda, wali waan dhaqaaqaynaa. Guusha aan gaarno ayaa sidoo kale ah mas'uuliyadda aan garabka ku hayno. Waxaan had iyo jeer diirada saari doonaa inaan siino macaamiisha adeegyadooda ugu xirfadeed.
Waqtiga boostada: Jul-29-2020